February | 2009 | Zox Again
February 24, 2009 by zoxagain
February 22, 2009 by zoxagain
VISIT VISA နဲ့သွားပြီးအလုပ်ရသွားရင် IRAN နိုင်ငံကို ကုမ္မဏီစရိတ်နဲ့သွားပြီး ကုမ္မဏီကပဲ EMPLOYMENT VISA ချိန်းပေးပါတယ်။ UAE VISIT VISA နဲ့ပတ်သက်ပြီး စိတ်ဝင်စားရင် ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
February 21, 2009 by zoxagain
အမေရိကန်ဗီဇာယူဖို့အတွက် ကိုယ့်ဘက်ကခိုင်ခိုင်မာမာမရှိဘူးဆိုရင် လွယ်လွယ်ကူကူမရနိုင်ဘူးဆိုတာ လူတိုင်းသိကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ US EMBASSY တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူး။ နိုင်ငံတိုင်းလိုလိုက အမေရိကန်သံရုံးအားလုံး တင်းကျပ်တဲ့စစ်ဆေးမှုတွေကို ပြုလုပ်ပါတယ်။ အဲဒီနောက်ပိုင်းမှ သူတို့ဘက်က စိတ်ကျေနပ်မှုရှိတယ်ဆိုရင် US ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာကို ထုတ်ပေးပါတယ်။
ကိုယ့်ဘက်က ခိုင်မာမှုဆိုတဲ့နေရာမှာလည်း USA မှာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဆွေမျိုးရင်းချာတစ်ယောက်ယောက်က GREEN CARD လောက်ရှိနေမှသာ မျှော်လင့်ချက်ထားနိုင်တာပါ။ ဒါတောင် တော်တော်များများ CANCEL လုပ်ခံရတာကို ကြုံဖူးပါတယ်။ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ဆိုရင် ညီမရော၊ အစ်မရော၊ အစ်ကိုရော ဟိုမှာ GREEEN CARD ရထားတာပါ။ အဲဒါဒီမှာရှိနေတဲ့ ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေဖြစ်သူနဲ့ သူ့မိခင်ဖြစ်သူကိုခေါ်တာ ဒီသံရုံးကခွင့်မပြုပါဘူး။ အကြိမ်ကြိမ်ကြိုးစားပါတယ်။ မအောင်မြင်ပါဘူး။ သူတို့နှစ်ယောက်လုံးကလည်း နိုင်ငံခြားကိုတစ်ခါမှ မထွက်ဖူးတဲ့အစိမ်းစိမ်းသက်သက်တွေ။ သံရုံးကိုသူတို့ပတ်စ်ပို့တ်တင်တော့ သူတို့စာအုပ်မှာက ဘာတုံးမှမရှိဘူး။ တဘက်ကပတ်စ်ပို့တ်စာအုပ်ကလည်း ခိုင်မာမှုရှိမယ်ဆိုရင်တော့ အများကြီးဗီဇာရဖို့ အထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်။
နောက်မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ကျတော့ နိုင်ငံစုံ (နိုင်ငံကြီးတော်တော်များများ) ကိုလည်ပတ်ဖူးပါတယ်။ နိုင်ငံကြီးတွေရဲ့ ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာတွေ သူ့မှာရှိပါတယ်။ အမေရိကန်ဗီဇာကို သူသွားလျှောက်တော့ ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲ ရရှိလိုက်ပါတယ်။ သူတို့မေးသမျှကိုတော့ လိပ်ပတ်လည်အောင်တော့ ဖြေခဲ့ရတယ်လို့ သူကပြောပါတယ်။ သူတို့ဘာတွေမေးလဲဆိုတော့…
> Which type of visa do you want ?
> What is your rank or position ?
> Which countries have you entered ?
> Where and when did you apply the last US visa ?
> Have you ever been refusedaUS visa ? If YES, why ?
> How many tims did you apply US visa ?
> Have you ever been to US ? When ? Where ?
> May you explain the situation ?
> Have you known departure date and flight details ?
> Which agent in US will be contacted ?
> How many sibling do you have ?
> What are they doing ?
> What is your brother/ Sister in law job ?
> Can you show me officer license, if you pass the exam ?
> Are you, or any of your immediate family members, an official of the Union Solidarily and Development Association (USDA) ?
> Are you, or any of your immediate family members,acurrent of former member of the State Peace and Development Council (SPDC) ?
> Are you, or any of your immediate family members,aformer or retired members of the State Law and Order Restoration Council (SLORC)
> Are you, or any of your immediate family members, employed inastate- owned enterprise, in the civil service, or by the military ?
February 20, 2009 by zoxagain
မြန်မာ့တွင်းထွက်ကျောက်မျက်တွေနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ ပန်းချီကားတွေကို ဒီဘလော့ဂ်မှာ ရှုစားနိုင်ပါတယ်။ အရောင်မျိုးစုံလှတဲ့ တွင်းထွက်စစ်စစ်တန်ဖိုးကြီး ကျောက်မျက်အမှုန်အစလေးတွေကို ပန်းချီကားတစ်ခုဖြစ်အောင် ခဲရာခဲဆစ်ဖန်တီးထားတာကို တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ နှစ်သက်ရာဒီဇိုင်းကိုလဲ မှာကြားနိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားရင်တော့ အောက်ကလိပ်စာအတိုင်း သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ လိပ်စာကတော့ www.zox-netmaze.iblogger.org ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။